छोरी उचाल, बुहारी निकाल « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : १० असार २०७५, आईतवार २३:४२
कथाहरु घरघरमै छन्, समाज त माथिको कुरा भयो । एउटा सैनिक पृष्ठभूमिको घर, जहाँ बुहारी प्रताडित छिन्, ज्वाइँ पालिएका छन् ।
नेपाली सेनाको सेनानी (मेजर) बाट अवकास पाएका ध्रुवराज थापा काठमाडौं, बालाजु, नेपालटारका बासिन्दा हुन् । हिजोआज कल्याणकारी कोषद्वारा लगनखेलमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा लेखापालको हैसियतसहित करारमा कार्यरत छन् । यिनका छोरा हुन्, पराग थापा । प्लस टु गरेका । लागुऔषधको अम्मली भएपछि पढाई चौपट । जिन्दगीमा तीनथोकमात्र जाने । हुलहुज्जत गर्ने, युवती फेर्दै हिँड्ने र कुलतमा पर्ने । बाबुआमाले पनि सत्य बोलेनन् । कम्प्युटर इञ्जिनियर भनेर २०७२ सालमा केटी माग्न पुगे, चोभार । त्यही वर्षको मंसिर ११ गते डिग्री उत्तीर्ण क्षेत्रीकी छोरीलाई बुहारी बनाएर घर भिœयाए ।
महिलाका लागि विवाह त्यस्तो बन्धन हो, जसमा बाँधिएपछि उनी समाजका लागि ‘केटी’ बाट ‘आइमाई’ मा परिणत हुन्छिन् । पति वियोग भयो वा कुनै कारणले पतिविहीन भइन् भने उनीसँग त्यही घरमा कुँजिएर बस्नुबाहेकका विकल्प त छन्, तर सोको प्रयोग उनका लागि सहज छैन । यहाँ पति वियोग वा पतिविहीनताको स्थिति छैन । छन्, पति भनाउँदा पुरुष साथमै । तर, डिग्री पढेकी छोरीले जीवनमा के–के गर्छु भनेर बुनेका सपनाहरु सब चकनाचुर छन् । ‘कम्प्युटर इञ्जिनियर’ भनेर विवाह गरिएका पुरुष विवाहको भोलिपल्टै लागुऔषधको दुव्र्यसनी भन्ने थाहा पाएपछि गर्न सक्ने नै के थियो र ? ‘झुक्किएर विवाह गरेछु, अब फर्किन्छु’ भन्दा समाजले कति गाल पार्छ होला † हो, यही ‘गाल’ नपारिनका लागि पीडामयी जीवन रोजेकी छन् । २०७३ को असारमा छोरी जन्मिइन् । अब त पति छाडौँ, समाजमा नानाभाँतीका लाञ्छना उनैले बोक्नुपर्ने । नछाडौँ, विवाह अर्थात्, राजीखुशीले नभएर परिबन्दमा बेचिएकी बधुजस्ती हुनुपर्ने † यो बाध्यताको बयान जति गरे पनि सकिँदैन ।
सेनानी ध्रुवराज थापाका यी एक्ला छोराको ढाँटेर विवाह गरिँदा बुहारीले भोगेको पीडाका कथाहरु फेरि फेरि खोतलौँला । छोरीका कुरा पनि कमका छैनन् ।
तीन छोरी छन् । जेठी हुन्, कल्याणी । ज्वाइँ ध्रुव पण्डित नेपाली सेनाको इञ्जिनियरिङतर्फ प्राविधिक मेजर छन् । माइली हुन्, करुणा । ज्वाइँ महेश्वर सिलवाल सेनामै मेजर छन् । गोदावरीका कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम सिलवालका छोरा । तर, बाबुको घरमा बस्दैनन्, न त आफ्नै घर जोडेका छन् । ससुरालीमा बस्छन् । बाबुसँग अंश मुद्दा लडिरहेका छन् । हेर्नुस् त, कस्ता–कस्ता छोरा जन्मिन्छन्, ससुरालीमा घरज्वाइँ बसेर जन्म दिने बाबुका विरुद्ध मुद्दा लड्ने । छ्या…!
कान्छी छोरी हुन्, डा.कमला थापा । कोटेश्वरस्थित गौतम बुद्ध अस्पतालका सञ्चालक विकास सुवेदीसँग विवाह गरेकी ।
घरमा ज्वाइँ पालिएका छन्, तर घरकी बुहारी लखेटिएकी छन् । ध्रुव र उनकी पत्नी दुर्गाले मिलेर दिएको यातनाका कारण एकमात्र बुहारी घरमा बस्न नसकी माइतको शरणमा छिन् । छोरीको जन्मदर्ता मागिन् । ‘किन चाहियो तँलाई ?’ भन्दै हप्काएर निकाले । विवाह भएको तीन वर्ष हुन लाग्यो, तर दर्ता गराइएको छैन । लागु औषधको दुव्र्यसनी छोरोलाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा लुकाएर राखिएको छ ।